ရာထူးအလိုက်လစာ - myanmar.paylab.com
Salaries range for person working in မြန်မာနိုင်ငံ is typically from 226,930 MMK (minimum salary) to 932,997 MMK (highest average, actual maximum salary is higher).
This is the total monthly salary including bonuses. Salaries vary drastically among different job categories. If you are interested in the salary ofaparticular category, see below for salaries for specific categories.
ရာထူးအမည်ပေးပါ Ward အကူ ကလေးထိန်း ကျန်းမာရေး/ဆေး၀ါးအရောင်းတာ၀န်ခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူ ကျန်းမာရေးဌာနအတွင်းရေးမှူး ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းစာရေး ကျန်းမာရေးအကြံပေး ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း လူငယ်လုပ်သား လူမှုရေးအကြံပေး ကျောက်ပတ်တီးကျွမ်းကျင် ကြံ့ခိုင်ရေးပညာရှင် ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး စကားပြောကုထုံးပညာရှင် စိတ်ကျန်းမာရေးအတိုင်ပင်ခံ စိတ်ရောဂါကုဆရာ၀န် စောင့်ရှောက်သူ စောင့်ရှောက်သူ၊ ကိုယ်ရေးလက်ထောက် ဆရာ၀န် တိုရိစ္ဆာန်ကု ဆေးခန်းအကူ ဆေးပေးခန်းသူနာပြု ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင် ဆေးဖက်ဓါတ်ခွဲခန်းမန်နေဂျာ တိရိစ္ဆာန်ကုသနည်းပညာရှင် တွဲဖက်သုသေသန(ဆေး၀ါး) ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ ဓါတ်မှန်ဆရာ မေ့ဆေးဆရာ၀န် မျက်စိဆရာ၀န် မျက်မှန်ပညာရှင် လက်ထောက်ဓါတ်မှန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိစ္စမန်နေဂျာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျွမ်းကျင် လူထုကျန်းမာရေးစီမံ လူနာတင်ယာဥ်ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင် လူနာတင်ယာဥ်မောင်း လူမှုဘ၀ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကျွမ်းကျင် သားဖွားမီးယပ် သူနာပြု မူကြိုကျောင်း/ကျောင်း/နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းသူနာပြု သူနာပြုခေါင်းဆောင် သွားဆေးခန်းအကူ သွားဖက်ဆိုင်ရာဆရာ၀န် သွားဖက်ဆိုင်ရာပညာရှင် သွားသန့်ရှင်းရေးပညာရှင် အနုဇီ၀ပညာရှင် အနှိပ်သည် အလုပ်သင်ဆရာ၀န် အလုပ်သင်သူနာပြု အဟာရကျွမ်းကျင်တွဲဖက် ခရီးသွားလမ်းညွန် ချက်ကြီး ဂျူတီမန်နေဂျာ စပါး၀န်ထမ်း စားပွဲထိုး စားပွဲထိုး - အခန်း၀န်ဆောင်မှု စားဖိုဆောင််အကူ စားဖိုမှူး စားသောက်ဆိုင်၀န်ထမ်း ဆိုင်/လုပ်ငန်းမန်နေဂျာ နေရာထိုင်ခင်းမန်နေဂျာ ပီဇာစားဖိုမှူး ဘားကိုင် ဘိုကင်ပွဲစား လက်ထောက်ချက်ကြီး လေယာဥ်မောင်/မယ် လောင်းကစား၀ိုင်းကိုင် လှုပ်ရှားမှုနည်းပြ သားရေစာ၀န်ထမ်း ဟိုတယ်အခန်းသန့်ရှင်းရေး ဟိုတယ်ဧည့်ကြို အကျွေးမွေးမန်နေဂျာ အလုပ်သင်သင်္ဘောသား အသက်ကယ်၊ ရေကူးနည်းပြ အော်ပရေးရှင်းဆူပါဗိုက်ဆာ ဧည့်ကြို ဧည့်ကြို၀န်ထမ်း ၀ိုင်ကျွမ်းကျင် စက်ချုပ် စက်ချုုပ်ဆရာ စက်မောင်း ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ၊ ပက်တမ်ဖြတ် ဖိနပ်ချုပ် အထည်ဖြတ် ကင်မရာအော်ပရေတာ ကြော်ငြာမန်နေဂျာ ဂရပ်ဖစ် အကြီးတန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ စာစစ် စာစီစာရိုက်၀န်ထမ်း စာပေအချက်လက်ထောက်ပံ့သူ စာအုပ်ချုပ်သူ စီစဥ်သူ တီဗီအစီစဥ်တင်ဆက်သူ ထုတ်လုပ်သူ ဒီဇိုင်းအကူ (ဂျာနယ်၊ပုံနှိပ်) ဓါတ်ပုံအယ်ဒီတာ နည်းပညာရှင်(မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး) ပုံနှိပ်စက်ပြင် ပုံနှိပ်တိုက်ဖလင်ခန်းမန်နေဂျာ ပုံနှိပ်၀န်ထမ်း မန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာ ရေဒီယိုအစီစဥ်တင်ဆက်သူ လက်ထောက်တီဗီ/ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး သတင်းထောက် သတင်းထောက် အယ်ဒီတာ အသံအင်ဂျင်နီယာ ငှားရမ်းမှုညွန်ကြားရေးမှူး ငှားရမ်းမှုအကြံပေး လျော်ကြေးစီမံအရာရှိ CNC စက်ဆင် CNC ပရိုဂရမ်မာ ကုန်ထုတ်မန်နေဂျာ ကုန်ထုတ်အစီစဥ်ဆွဲသူ ချိန်ညှိသူ စက်ဆင်သူ စက်ပြင်အင်ဂျင်နီယာ စက်မောင်း စက်မောင်း၊ စက်ပြင် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ စက်မှုုသိပ္ပံမန်နေဂျာ ဆန်စက်မောင်း တပ်ဆင်သူ ဒီဇိုင်းပညာရှင် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာထုတ်ကုန်အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာရှင် ပေါလစ်တင် မော်တော်ယာဥ်ပညာရှင် လက်မှတ်ရစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ သတ္တုအလုပ်သမား သံထည်ပုံသွင်း အခြေခံ၀န်ထမ်း အဖြတ်/အမွေ့/ပေါလစ်ကျွမ်းကျင် (စက်မှု) အလိုလျောက်စနစ်စီမံသူ အလိုလျောက်စနစ်အင်ဂျင်နီယာ အုပ်ကြီး အော်ပရေးရှင်းဆူပါဗိုက်ဆာ ၀န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၀ဲဒင်ကျွမ်းကျင် စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာအော်ပရေတာ စိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင် စိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလက်မှုပညာရှင် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရှင် စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေး၀န်ထမ်း ထရပ်တာ၊ ကောက်ရိတ်စက်မောင်း နို့ညစ်သူ မုန့်ဖုတ်စားဖိုမှူး၊ မုန့်အလှဆင်သူ မုန့်ဖုတ်သမား မွေးမြူရေးကျွမ်းကျင် ရိတ်သိမ်းသူ သားသတ်သမား အစားသောက်နည်းပညာကျွမ်းကျင် အစားသောက်ပညာရှင် အစားသောက်အင်ဂျင်နီယာ CSR အထူးကျွမ်းကျင်သူ Customer Support ဌာနမှူး ကားပြင်ဆိုင်မန်နေဂျာ ကုန်ထုတ်ဆူပါဗိုက်ဆာ ကုန်ထုတ်မန်နေဂျာ ကုန်လှောင်ရုံမန်နေဂျာ ငွေစာရင်းမန်နေဂျာ စက်ပြင်ဆူပါဗိုက်စာ စတိုးထိန်း စမ်းသပ်မန်နေဂျာ စာချုပ်များကို စီမံခန့်ခွဲသူ စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ စီမံ၀န်ထမ်း၊ ရုံး၀န်ထမ်း စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာ စီးပွားရေးအုပ်စုမန်နေဂျာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ စွန့်စားမှုမန်နေဂျာ ဌာနမန်နေဂျာ(စီမံခန့်ခွဲရေး) တင်ဒါစာရေး ထုတ်ကုန်ပိုင်ဆိုင်သူ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာ ဒေတာဖြည်သွင်းစာရေး (စီမံ) ဒေတာဖြည့်သွင်းအော်ပရေတာ(စီမံ) ဒေသ/ဧရိယာမန်နေဂျာ နည်းပညာမန်နေဂျာ ပရိုရောဂျက်အကူ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ အကြီးတန်းပရောဂျက်မန်နေဂျာ အငယ်တန်းပရောဂျက်မန်နေဂျာ ပို့ဆောင်ရေးညွန်ကြားရေးမှူး ပို့ဆောင်ရေးမန်နေဂျာ ပြန်၀င်ပစ္စည်းဌာနမန်နေဂျာ ပွဲမန်နေဂျာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာမန်နေဂျာ မော်ကွန်းထိန်း၊ ကျောင်းမှတ်တမ်းစီမံရေးမှုး ရုံးမန်နေဂျာ လက်ထောက် လုပ်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ လုံခြုံရေး၀န်ဆောင်မှုမန်နေဂျာ ဟိုတယ်မန်နေဂျာ အကောင့်ဒါရိုက်တာ အတွင်းရေးမှူး အနုပညာဒါရိုက်တာ အယ်ဒီတာချုပ် အရည်သွေးမန်နေဂျာ အရာင်းဌာနမန်နေဂျာ အရောင်းမန်နေဂျာ အသင်းခေါင်းဆောင် အိတ်ရှ်အာမန်နေဂျာ အိမ်ယာထိမ်းသိမ်းရေးမန်နေဂျာ အိုင်တီမန်နေဂျာ အ၀ယ်ကျွမ်းကျင် အ၀ယ်တော်မန်နေဂျာ ဥပဒေဌာနမှူး ဧည့်ကြို၀န်ထမ်း ရုံးကောင်တာအရာရှိချုပ် ဧည့်ကြို၀န်ထမ်းအကူ Customer Relationship Manager ကားအရောင်း၀န်ထမ်း ကျွမ်းကျင်ဆိုင်အကူ ငွေရှင်းကောင်တာ၀န်ထမ်း စတိုးဌာနမန်နေဂျာ စားဖိုဆောင်ဒီဇိုင်နာ စီးပွားရေးဆန်းစစ်သူ ဆိုင်အကူ ဌာနခွဲဆိုင်မန်နေဂျာ တယ်လီစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေး ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ ဖြန့်ချိရေးစာရေး မြင်ပန်းလှကုန်သည် မှတ်တမ်းစာရေး လက်ထောက်အရောင်းမြင့်တင်ရေး အကောင့်မန်နေဂျာ အင်တာနက်အရောင်းဆိုင်ကျွမ်းကျင် အင်တာနက်အရောင်းဆိုင်မန်နေဂျာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဌာနစာရေး အရောင်း/ငွေကောက် အရောင်းတာ၀န်ခံ အကြီးတန်းအရောင်းတာ၀န်ခံ အငယ်တန်းအရောင်းတာ၀န်ခံ အရောင်းပစ္စည်းမန်နေဂျာ အရောင်းအင်ဂျင်နီယာ အရောင်းအတိုင်ပင်ခံ အရောင်းအရာရှိ အရောင်း၀န်ထမ်း အရေးကြီးအကောင့်မန်နေဂျာ အွန်လိုင်းစျေးဆိုင်စီမံသူ အ၀ယ်တော် ၀ယ်ရောင်းကုန်သည် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကိုင် ကျွမ်းကျင်သတင်းထောက် ငွေကောက်ကျွမ်းကျင် ငွေကောက်စာရေး ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုလက်ထောက် ငွေကြေးစျေးကွက်ကျွမ်းကျင် ငွေကြေးဆန်းစစ်သူ ငွေကြေးပွဲစား ငွေကြေးအကြံပေး စာရင်းကိုင် အကြီးတန်းစာရင်းကိုင် အငယ်တန်းစာရင်းကိုင် စာရင်းကိုင်ချုပ် စာရင်းစစ် စာရင်းအင်းပညာရှင် အကြီးတန်းစာရင်းအင်း အငယ်တန်းအချက်အလက် စီးပွားရေးပညာရှင် ဌာနစာရင်းကိုင်ချုပ် ထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိ ဒေတာဆန်းစစ်သူ (စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး၊စာရင်းကိုင်) လက်ထောက်ငွေကြေးထိန်းချုပ်သူ လက်ထောက်စာရင်းစစ် လက်ထောက်အခွန်ကြံပေး လစာစာရေး လျော်ကြေးကျွမ်းကျင် အကြံပေး အခွန်အကြံပေး CRM ကျွမ်းကျင် ကြော်ငြာစာရေးသူ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ စာစီစာရိုက်၀န်ထမ်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစမ်းစစ်သူ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ ဒီဂျီတယ်စျေးကွက်မြင့်တင်ရေးပညာရှင် ပီပီစီကျွမ်းကျင် ပီအာမန်နေဂျာ မီဒီယာစီစဥ်သူ မီဒီယာအ၀ယ်တော် လက်ထောက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူ လက်ထောက်အရောင်းမြင့်တင်ရေး လူမှုကွန်ယက်ကျွမ်းကျင် အကောင့်မန်နေဂျာ အကောင့်အရာရှိ အက်စ်အီးအိုစီစစ်သူ အတွင်းဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင် CAD ကျွမ်းကျင် Engineer Geodesist (Practical geodesy) ကရိန်းအော်ပရေတာ ကုန်ထုတ်မန်နေဂျာ ကျောက်ခတ်ဆရာ ကြမ်းခင်းကျွမ်းကျင် ကြိုးဆင် စက်ပြင်အလုပ်သမား စက်မောင်း၊ စက်ပြင် ဆောက်လပ်ရေး၀န်ထမ်း ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းသူ ဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၀န်ထမ်း ဆောက်လုပ်ရေးအချောကိုင်အလုပ်များ ဆေးသုတ် တင်ဒါအင်ဂျင်နီယာ တပ်ဆင်သူ တိုက်တာအဆောက်ဦးမန်နေဂျာ ဒီဇိုင်းပညာရှင် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ပထ၀ီပညာရှင် ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ပိုက်ပြင် ပုံစံအင်ဂျင်နီယာ ဗိသုကာပညာရှင် အငယ််တန်းဗိသုကာ မြေတိုင်း/ဘူမိပညာရှင် မြေတိုင်းဗိသုကာ မြေယာပြင်ဆင် ရာပြတ် လက်ထောက်စီစဥ်သူ လက်သမား သံထည်အလုပ်သမား အကွာအ၀ေးစီမံသူ အခန်းဒီဇိုင်နာ အဆောက်ဦးဆိုင်ရာစက်မှုပညာရှင် အဆောက်ဦးဆိုင်ရာစာရင်းစစ် အဆောက်ဦးအင်ဂျင်နီယာ အမိုးတည်ဆောက်သူ အမြင့်တက်အလုပ်သမား အအေးပိုင်းစက်ဆရာ အိမ်ပွဲစား အုတ်စီကျွမ်းကျင် ၀ဲဒင်ကျွမ်းကျင် ကျန်းမာရေး/ဆေး၀ါးအရောင်းတာ၀န်ခံ ကျန်းမာရေးအကြံပေး ဆေးခန်းအချက်အလက်မန်နေဂျာ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင် ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင် ဆေးမှူး လက်ထောက်ဆေး၀ါးကျွမ်းကျင် ဆေး၀ါးထိန်းချုပ်ရေးပညာရှင် တွဲဖက်သုသေသန(ဆေး၀ါး) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိစ္စမန်နေဂျာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျွမ်းကျင် ကွန်ယက်ထုတ်လွင့်မှု စမ်းစစ်နှင့်တိုးချဲ့ကျွမ်းကျင် ကွန်ယက်နှင့်၀န်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်ကျွမ်းကျင် ကွန်ယက်ပုံစံထုတ်ကျွမ်းကျင် ကွန်ယက်ပြောင်းလဲမှုကျွမ်းကျင် ကွန်ယက်ဗျူဟာကျွမ်းကျင် တည်လီ၀န်ဆောင်မှုတိုးတက်ရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တပ်ဆင်သူ တယ်လီဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဒီဇိုင်နာ တယ်လီဆက််သွယ်ရေးထုတ်ကုန်တိုးတက်ရေးကျွမ်းကျင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင် ဒေတာဌာနစမ်းသပ်ကျွမ်းကျင်(ဆက်သွယ်ရေး) နည်းပညာရှင် မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကျွမ်းကျင် ရိုမ်းမင်းကျွမ်းကျင် ရေဒီယိုကွန်ယက်စီစဥ်ကျွမ်းကျင် ရေဒီယိုကွန်ယက်စောင့်ကြည့်ကျွမ်းကျင် အိုအက်စ်အက်စ်/ဘီအက်အက်စ်ကျွမ်းကျင် ကိရိယာထိန်း ကုန်ထုတ်အစီစဥ်ဆွဲသူ စက်ချိန်ညှိသူ စက်ပြင်အင်ဂျင်နီယာ စက်မောင်း တပ်ဆင်သူ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ ထုတ်ကုန်အရည်သွေးထိန်း ထုတ်လုပ်ရေး၀န်ထမ်း ထုပ်ပိုးရေး ဒီဇိုင်းပညာရှင် ပေါလစ်တင် မော်တော်ယာဥ်ပညာရှင် မှန်ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ သတ္တုအလုပ်သမား သာမန်အလုပ်သမား အတိုင်းတာပညာရှင် အရည်သွေးစစ်ဆေးသူ အော်ပရေးရှင်းဆူပါဗိုက်ဆာ ၀န်ဆောင်မှုပညာရှင်် ၀န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ စက်မောင်း ဓါတုဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင် ဓါတုဗေဒပညာရှင် ဓါတုအင်ဂျင်နီယာ မော်တော်ယာဥ်ပညာရှင် နည်းပညာဌာနမှူး နည်းပညာ၀န်ထမ်း ပထ၀ီအချက်အလက်စနစ်အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ ကာယနည်းပြ ကားမောင်းသင်ဆရာ ကျောင်းကန်တင်းမန်နေဂျာ ကျောင်းဆရာ ကျောင်းအစောင့် ဂီတနှင့်အနုပညာကျောင်းဆရာ စာကြည့်တိုက်မှူး စာပြ စာပြ/နည်းပြ/စောင့်ရှောက်သူ စိတ်ပညာရှင် ဆရာ/မ ဇီ၀ဗေဒပညာရှင် ဌာနခွဲကျောင်းအုပ် တက္ကသိုလ်ဆရာ/မ တက္ကသိုလ်နည်းပြ ဒေသံသရပညာရေးမာစကာ ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရှင် နည်းပြ ပညာရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး ပါမောက္ခ မသန်စွမ်းဆရာ/မ မူကြိုကျောင်းဆရာမ မူကြိုကျောင်းလက်ထောက်ဆရာမ ရှေးဟောင်းသုတေသီ လက်ထောက်ဆရာ/မ လက်ထောက်တက္ကသိုလ်ဆရာ/မ သုတေသန၀န်ထမ်း အခြေခံပညာကျောင်းဆရာ/မ အထက်တန်းကျောင်းဆရာ အားကစားနည်းပြ ကုန်ကြမ်းစီစစ်သူ ကုန်လှောင်ရုံအလုပ်သမား ကောင်တာစာရေး စာတိုက်၀န်ထမ်း စာပို့ စာပို့၀န်ထမ်း ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ တာမီနယ်ထိန်း ထွက်ခွာ စာရေး (ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ပို့ဆောင်ရေးစာရေး ပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်သူ ဖော့ကလစ်မောင်း ဖြန့်ချိရေးစာရေး မီးရထားလမ်းပြ မီးရထားလမ်းပြောင်း မော်တော်ယာဥ်စက်မှူး ယာဥ်ထိန်း ယာဥ်မောင်း ထရမ်းမောင်း ထိုလီဘာစ်ဒရိုက်ဘာ ဘာစ်ကားယာဥ်မောင်း ယာဥ်မောင်း လောလီယာဥ်မောင်း ယာဥ်လမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစီစဥ်သူ ရေကြောင်းအရာရှိ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းသူ လေယာဥ်စက်ပြင် လေယာဥ်မှူး လေယာဥ်အင်ဂျင်နီယာ လွဲပြောင်းသူ သင်္ဘောသား သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန်အရာရှိ အကောက်ခွန်၀န်ထမ်း အခွန်ကိစ္စဆောင်ရွက်သူ အင်ဂျင်မောင်း အ၀ယ်တော်မန်နေဂျာ ဌာနဒါရိုက်တာ (လူထုစီမံ) တစ်သီးပုဂ္ဂလကျွမ်းကျင်လက်တွဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလတရား၀င် တစ်သီးပုဂ္ဂလအကြံပေး တွဲဖက် ထောက်လှမ်းရေး ဒေသံသရထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိချုပ် နိုင်ငံတော်အကြံပေး နိုင်ငံတော်အကြံပေးချုပ် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ရုံးအရာရှိ ရုံးအရာရှိချုပ် အကောက်ခွန်အရာရှိ အကြီးတန်းလက်ထောက် အကြံပေး အကြံပေးကျွမ်းကျင် အကြံပေးချုပ် အတွင်းရေးမှူး အထွေထွေနိုင်ငံ့အကြံပေး ကဒ်၀န်ဆောင်မှုစာရေး ကိုယ်ရေးဘဏ်၀န်ထမ်း ချေးငွေကျွမ်းကျင် ငွေကြေးခ၀ါချမှုထိန်းချုပ်ကျွမ်းကျင် ငွေကြေးဆန်းစစ်သူ ငွေကြေးအကြံပေး ငွေချေစာရေး ငွေတိုက်ကျွမ်းကျင် (ဘဏ်) စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးကျွမ်းကျင် စတော့ပညာရှင် စွန့်စားမှုကျွမ်းကျင် ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာ ဌာနမန်နေဂျာ(စီမံခန့်ခွဲရေး) ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ - ကျွမ်းကျင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်၀န်ထမ်း ပေါင်နှံမှုကျွမ်းကျင် ဖောက်သည်၀န်ဆောင်မှုအရာရှိ ဘဏ်၀န်ဆောင်မှုအရာင်း/ချေးငွေအရာရှိ လျော်ကြေးစီမံအရာရှိ အကောင့်မန်နေဂျာ အတွင်းစာရင်းစစ် အနောက်ရုံးကျွမ်းကျင် အ၀ယ်ရောင်း/ကုန်သည် စကားပြန် စာစစ် ဘာသာပြန် ကားကိုယ်ထည်ပြင် ကားစက်ပြင် ကားစက်ပြင် ကားမှန်တပ်ဆင်သူ ကားလျှပ်စစ်ပညာရှင် ကားအတွင်းခန်းအလှဆင်သူ စက်ပြင်ပညာရှင် (ကား) စက်ပြင်အင်ဂျင်နီယာ စက်မောင်း တာယာတပ်ဆင်သူ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ပေါလစ်တင် မော်တော်ယာဥ်ပညာရှင် လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစက်ပြင် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် အရည်သွေးစစ်ဆေးသူ တောထိန်း ဒေသသစ်တောအရာရှိ ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် ပေါက်စိန်ကိုင် ဘောဂဘေဒပညာရှင် မိုးလေ၀သပညာရှင် ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်အင်ဂျင်နီယာ ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းချုုပ်ပညာရှင် သစ်တောပညာရှင် သစ်တောမန်နေဂျာ သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ သတ္တုတွင်းမန်နေဂျာ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအရာရှိ စစ်သား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲ ထောင်အရာရှိ မီးဘေးကာကွယ်ရေးအရာရှိ မီးသတ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး ရဲအရာရှိ လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင် လုံခြုံရေးအစောင့် ဌာနမန်နေဂျာ(စီမံခန့်ခွဲရေး) နည်းပြ နည်းပြ နှစ်နာကြေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်ကျွမ်းကျင် ပညာရေးကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်း လူသစ်စုဆောင်းသူ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်စိတ်ပညာရှင် အလုပ်အကိုင်အကြံပေး အိတ်ရှ်အာကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်း အိတ်ရှ်အာစီးပွားရေးမိတ်ဖက် အိတ်ရှ်အာအကူ အိတ်ရှ်အာအကြံပေး အိတ်ရှ်အာအရာရှိ အိတ်ရှ်အာ၀န်ထမ်း ကားစက်ပြင် စက်ပြင်အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပညာရှင် ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာရှင် နည်းပညာအင်စပက်တာ ပါ၀ါအင်ဂျင်နီယာ ပီအယ်လ်စီပရိုဂရမ်မာ မီးစက်စက်ကိုင် မော်တော်ယာဥ်ပညာရှင် လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်သူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင် လျှပ်စစ်ပညာရှင် လျှပ်စစ်ပညာရှင်(စက်မှု) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင် ၀န်ဆောင်မှုပညာရှင်် ၀န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ ကူရှင်ချုပ် ချိတ်ဆက်သူ စက်မောင်း ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ဗီဒိုလက်သမား လွှဆင် သစ်ခုတ်သမား သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ သစ်ထုတ်ကုန်ပညာရှင် Backend developer Cloud အင်ဂျင်နီယာ Data scientist DevOps အင်ဂျင်နီယာ Frontend developer Game developer Go developer IT Business Analyst IT tester - automated tests Lead developer SAP အထူးကု ကွန်ပြူတာပြင် ဂိမ်းဒီဇိုင်နာ စနစ်ထိန်းချုပ်သူ စနစ်အင်ဂျင်နီယာ စီးပွားရေးအသိပညာရှင် စုပေါင်းအလုပ်ကြီးကြပ်သူ ဆောဖ့်၀ဲအကြံပေး ဆောဖ့်၀ဲအင်ဂျင်နီယာ ဒေတာဆက်သွယ်ရေးပညာရှင် (သတင်းအချက်လက်) ဒေတာဆန်းစစ်သူ(သတင်းအချက်လက်) ဒေတာဘေစ့်စီမံသူ(သတင်းအချက်လက်) နည်းပညာစာရေးဆရာ ပရိုဂရမ်မာ ABAP ပရိုဂရမ်မာ ASP.NET ပရိုဂရမ်မာ C ပရိုဂရမ်မာ C# ပရိုဂရမ်မာ C++ ပရိုဂရမ်မာ iOS ဆောဖ့်၀ဲရေးသူ ဂျာဗားဆခရဗ့်ပရိုဂရမ်မာ ဂျာဗားပရိုဂရမ်မာ ဒေါ့နက်ပရိုဂရမ်မာ ပါလ်းပရိုဂရမ်မာ ပိုင်သွန်ပရိုဂရမ်မာ ပီအိတ်ရှ်ပီပရိုဂရမ်မာ ရူဘီရေးသူ/ပရိုဂရမ်မာ အနုဇီ၀ထိန်းချုပ်ရေးပရိုဂရမ်မာ အန်းဒွိုက်ဆောဖ်၀ဲရေးသားသူ အောဖ်ဂျက်စ်တစ်စီပရိုဂရမ်မာ အော်ရီကယ်ပရိုဂရမ်မာ အသုံးပြုသူအတွေ့ကြုံကျွမ်းကျင် အိုင်စီတီကျွမ်းကျင် အိုင်စီဒီဇိုင်းမန်နေဂျာ အိုင်တီ/နည်းပညာအထောက်ကူပြုကျွမ်းကျင် အိုင်တီကွန်ယက်စီမံသူ အိုင်တီစနစ်စီမံသူ အိုင်တီစမ်းသပ်သူ အိုင်တီဆန်းစစ်သူ အိုင်တီထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ အိုင်တီပရောဂျက်မန်နေဂျာ အိုင်တီဗိသုကာ အိုင်တီလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင် အိုင်တီအကြံပေး အိုင်ဒီစာရင်းစစ် ၀န်ဆောင်မှုပညာရှင်် ၀န်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၀ဘ်ဒီဇိုင်နာ ၀ဘ်မာစတာ သတ္တုတွင်းစက်ပြင် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာ သတ္တုတွင်းအလုပ်သမား သတ္တုပညာရှင် သတ္တုအင်ဂျင်နီယာ သံထည်ရှာဖွေသူ ကိုယ်ရေးမန်နေဂျာ ကုန်ထုတ်ဒါရိုက်တာ ကျောင်းအုပ် စီမံခန့်ခွဲမှုအရာရှိချုပ် စီးပွားရေး/ငွေကြေးမန်နေဂျာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ ဆေးသိပ္ပံကျောင်းမန်နေဂျာ တိုးတက်ရေးဒါရိုက်တာ ဒေသမန်နေဂျာ ဒေသမန်နေဂျာ/ဒါရိုက်တာ ဓါတ်ခွဲခန်းဒါရိုက်တာ နည်းပညာဒါရိုက်တာ ပို့ဆိုင်ရေးညွန်ကြားရေးမှူး ပုံနှိပ်တိုက်ဒါရိုက်တာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာဒါရိုက်တာ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ရုံးခွဲဒါရိုက်တာ လုံခြုံရေး၀န်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာ အရည်သွေးထိန်း/အိုက်အက်စ်အိုမန်နေဂျာ အရောင်းဒါရိုက်တာ အိုင်တီဒါရိုက်တာ အော်ပရေးရှင်းမန်နေဂျာ စစ်တမ်းကောက်သူ စားပွဲထိုးမိန်းခလေး ပြာတာ၊ အချက်အလက်၀န်ထမ်း သန့်ရှင်းရေး သန့်ရှင်းရေးမန်နေဂျာ အခြေခံ၀န်ထမ်း အိမ်အကူ ကခြေသည် စတိတ်ပညာရှင် တံခါးအလှဆင်သူ၊ အလှဆင်သူ ဒီဇိုင်နာ ဓါတ်ပုံဆရာ ပစ္စည်းထိမ်းသိမ်းသူ (ပြတိုက်) မိတ်ကပ်ပညာရှင်၊ ဆံပင်တုပြုလုပ်သူ မီးထိုးမှန်ထိုး မော်ဒယ် ယဥ်ကျေးမှုအရာရှိ ရုပ်ရှင်အယ်ဒီတာ သရုပ်ဆောင် အကပညာရှင် အနုပညာ/ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိမ်းသိမ်းသူ အသံအင်ဂျင်နီယာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအကူ iOS ကျွမ်းကျင် အရည်သွေးစစ်ဆေးသူ အရည်သွေးစီစဥ်သူ အရည်သွေးအင်ဂျင်နီယာ ကျန်းမာရေးပစ္စည်းအ၀ယ်တော် ကျန်းမာရေးအစီအစဥ်တိုးတက်ရေးကျွမ်းကျင် စာရင်းဌာနစာရေး ဌာနမန်နေဂျာ(စီမံခန့်ခွဲရေး) ထုတ်ကုန်မြင့်တင်ရေးကျွမ်းကျင် ပြန်လည်အာမခံကျွမ်းကျင် မှတ်ပုံတင်စီမံမန်နေဂျာ အာမခံစရိတ်တွက်သူ အာမခံစာရင်းစစ် အာမခံစာရေး အာမခံစီမံသူ အာမခံနည်းပညာရှင် အာမခံပေးချေမှုထိန်းချုပ်ကျွမ်းကျင် အာမခံအတွင်းစာရေး စီမံအရာရှိ တရားသူကြီး တွဲဖက်နိုထရီရှေ့နေ နိုထရီရှေ့နေ ဘီလစ်/တရားစွဲအရာရှိ ရှေ့နေ ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေ၊ ၀တ်လုံတော်ရ အလုပ်သင်ရှေ့နေ အလုပ်သင်အမှုဆွဲ ဥပဒေအရအပြစ်ပေးသူ ဥပဒေအရာရှိအကူ Car Wash Worker စက်ပြင်၀န်ထမ်း စက်ဘီးပြင်ဆရာ ဆီဆိုင်ဆီဖြည့် ဆံပင်ပုံသွင်းပညာရှင် ဈာပနဝန်ဆောင်မှု ပန်းအလှဆင်သူ ပိုင်ဆက်ပိုက်ပြင် ဘွိုင်လာထိန်းချုပ်သူ ရွှေပန်းထိမ်၊ ရတနာပညာရှင် လက်သည်းခြေသည်းကျွမ်းကျင် ဟိုတယ်အခန်းသန့်ရှင်းရေး ဟိုတယ်အခန်းသန့်ရှင်းရေးမန်နေဂျာ အမြင်တင့်ဖန်တီးရှင်/အလှဖန်တီးရှင် အမှိုက်သိမ်း အလှဖန်တီးရှင် ဥယာဥ်မှူး ၀န်ဆောင်မှုပညာရှင်် နည်းပညာအထောက်ကူပြုကျွမ်းကျင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစင်တာဆူပါဗိုက်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအော်ပရေတာ ဖောက်သည်၀န်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင် ဖောက်သည်၀န်ဆောင်မှုဆန်းစစ်သူ အကူညီပေးသူ
ခရီးသွား၊ အချက်ပြုတ်၊ ဟိုတယ်စီးပွားရေး
စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး၊ စားရင်းအင်း
ပို့ဆောင်ရေး, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး